Gabadheyda oo yar ayaan dayacay, 16 sano kaddib nafteyda ayey badbaadisay’ | Qurbaha.Net :: Isha Wararka Soomaalida Qurbaha
Home World News Gabadheyda oo yar ayaan dayacay, 16 sano kaddib nafteyda ayey badbaadisay’
Kaddib markii ay in muddo ah dagganaayeen koonfurta Faransiiska, qoyskiisa waxay u guureen magaalo yar oo ku taalla gobolka Ohio, halkaasoo uu kula kulmay gabdhii ugu horreysay ee uu saaxiib la noqday, waana Selanie.
“Xiriir ayaan sameysannay, dhowr sano ayaana wada soconnay, kaddibna wuu soo afjarmay xiriirkeennii. Laakiin Selanie uur ayey ii yeelatay,” ayuu yiri Matjames.
Xilligaas Matjames wuxuu ahaa 18 jir wuxuuna dareemayay inauusan wali diyaar u ahayn aabbenimo.
“Aad baan u cabsanayay. Adduunyada oo dhan ayaa jahwareer ila noqotay,” ayuu yiri.
Selanie waxay ugu dambeyn dhashay gabar ay ku magacowday Tyler.
Markii ay gabadha yar dhalatay, Matjames wuxuu Selanie kula kulmay isbitaalka wuxuuna markii ugu horreysay dhabtiisa saaray gabdhiisa.
Wuxuu sheegay in xilligaas uusan niyad ahaan u dareemeynin xaaladda aabbenimada.
Matjames wixii xilligaas ka dambeeyay wuxuu billaabay inuu ka cararo gabadhiisa iyo hooyadeed, dib dambe inuu ula kulmana ma uusan dooneynin.
“Hal mar iguma soo dhicin inaan meel fariisto oo aan si kalinnimo ah uga fakaro xaaladdaas. Waxaan door biday inaan cararo, sidaas ayaana mar walba uga sii fogaan jiray.”
Muddo markii uu joogay magaalooyinka Montreal iyo Boston, Matjames wuxuu ugu dambeyn dagay magaalo ka tirsan gobolka New Orleans, xilligaasna da’diisu waxay ahayd 19 ama 20 sano.
Way u suurtoobi weysay inuu ka baxsado xaaladdiisii hore. Goor dambe wuxuu Matjames farshaxan ka sameeyay noloshiisii.
Tallaabadaas waxay u horseedday “in uu nafis ka dareemo maskaxdiisa”, sida uu sheegay.
Wuxuu noqday nin si weyn loogu yaqaanno fanka, taageero badanna loo hayo.
Dhinaca kale, gabadhiisa Tyler Hurwitz, waxay ku koreysay xaafadda Yellow Springs, halkaasoo ay la joogtay hooyadeed, oo iyada lafteeda si fiican u taqaanna farshaxanka.
Waxay xasuusataa inay hooyadeed wax xardhi jirtay, xilli ay iyadu afar sano jir ahayd.
“Waxay ahayd qof hal abuur leh oo mar walba ay muuqatay inay xirfaddeeda tahay mid u dhalasho ah. Howsheeda farshaxanka waxay socotay ilaa markii aan dhashay, mana dhammaanin waligeed,” ayey tiri.
Selanie waxay guursatay nin kale, waxayna dhashay gabar kale. Tyler waxay sheegtay inaysan waligeed tabin aabaheeda dhabta ah.
“Waxaan heystay dad aad u badan, qoys iyo saaxiibbo intaba way igu hareereysnaayeen xilli walba, waxay ila tahay inaanan waligey ka fikirin aabahayga saxda ah,” ayey tiri.
“Ma ahayn wax maskaxdeyda dhib ku hayay, sidaas darteed wax su’aal ahba kama keenin waligey, mana isweydiinin meesha uu ku sugan yahay.”
Sida hooyadeed oo kale, waxay iyadana noqotay farshaxamiiste xirfad sare leh.
Haddii aan usoo laabanno Matjames, markii uu 30 sano gaaray wuxuu ahaa mid ka mid ah farshaxamiisteyaasha loogu jecel yahay magaalada.
Hase ahaatee , sanadkii 2005-tii waxaa timid musiibadii duufaanta Katrina, taasoo fatahaado kusoo rogtay gobolka oo dhan.
Ku dhawaad 2,000 oo qof ayaa ku geeriyootay musiibadaas, in ka badan hal milyan oo ruuxna way ku barakaceen.
Tyler, oo markaas 16 jir ahayd iyo hooyadeed way la socdeen xaaladda. Hooyadeed ayaa u keentay warqad ay ku qoran yihiin lambarka telefoonka aabbaheed iyo meesha laga helo.
Waxay ka dalbatay inay raadiso. Telefoonkii ay ka wacday iyadoo u heysata in hooyadeed ay dooneysay kaliya in ay wacdo haddii ay u baahato.
“Waxba igama hallaabeynin haddii aan waco, sidaas darteed ayaan u go’aansaday inaan la hadlo. Markii uu telefoonka iga qabtay wax dareen ah ima galin mana walwalin.”
Matjames wuxuu ka cabsanayay in wicitaankaas loogu sheegayo dhibaato kale oo gaartay dadkii saaxiibbadiisa ahaa – laakiin wuxuu maqlay codka Tyler.
“Waligaa ma u maqashay magac la yiraahdo Tyler?” ayey ku tiri.
Matjames ayaa ku jawaabay: “Tyler, wicitaankan waxaan sugayay muddo 16 sano ah.”
“Kaddib waxaan ku iri, ‘Miyaad i neceb tahay?'” ayey tiri Tyler.
“Waxaan ku dhahay, ‘Runtii aniga kuma necbi ee adiga miyaad i neceb tahay?'” ayuu yiri Matjames.
Sidaas ayuu Matjames ku helay gabadhiisa, wuxuuna helay sabab kale oo uu nolosha ugu sii xiisa qabo.
Niyadda ayaa u dagtay, wuxuuna dib ugu laabtay shaqadiisii, isagoo u guuray guri cusub.
Dhowr sano kaddibna Tyler waxay u duushay magaalada Los Angels si ay markii ugu horreysay u aragto aabbeheed.
Previous articleWaa maxay sababta Barcelona Loogu garaacay saxiixa David Alaba xili ay baahi weyn u qabtay?
Next articleDowlada Itoobiya oo balan qaaday in ay dib u dhiseyso Masjid ay horay u dhiseen Saaxabadii Nabaiga SCW.